Gịnị bụ Ọdịnaya Ahịa? | Martech Zone
Ọ bụ ezie na anyị na-ede banyere ahịa ọdịnaya ruo ihe karịrị afọ iri, echere m na ọ dị mkpa ka anyị zaa ajụjụ ndị bụ isi maka ụmụ akwụkwọ abụọ nke ịre ahịa yana ịkọwapụta ozi enyere ndị ahịa nwere ọfụma. Ọdịnaya ọdịnaya bụ okwu na-adọrọ mmasị. Ọ bụ ezie na ọ dịwanye ọkụ n'oge na-adịbeghị anya, enweghị m ike icheta oge mgbe azụmaahịa enweghị ọdịnaya metụtara ya. Mana enwere usoro ịre ahịa ọdịnaya karịa ịmalite blọgụ, yabụ ka anyị tinye ụfọdụ agba gburugburu ahịrịokwu ahụ.
content Marketing bụ atụmatụ, imewe, mmepe, ogbugbu, ịkekọrịta, nkwalite na njikarịcha nke ọdịnaya mepụtara iji nweta ndị ahịa ọhụụ, debe ndị ahịa ugbu a, ma bulie uru nke mmekọrịta ndị ahịa ugbu a.
Kedụ ka ahịa Ahịa si arụ ọrụ?
M na-enyere ụlọ ọrụ aka ihe karịrị afọ iri site na iji usoro azụmaahịa ọdịnaya ha. N'elu bu vidiyo anyi jiri nyere ndi ahia anyi aka ighota otu anyi si eji ahia ahia eme ka anyi gha achu ahia site na iji saiti, ahia acho, ahia ahia, na mgbasa ozi na intaneti.
E nwere ihe atụ na m na-eji ruo ogologo oge mgbe ọ bịara ahia na mgbasa ozi. Mgbasa ozi na-etinye nri na nko ma tinye ya na mmiri, na-atụ anya na azụ ahụ ga-ata. Ire ahia bu usoro ichota azu, ichoputa mgbe ha na ata aru, ihe ha tara, na ogologo oge tupu ha ata aru.
Ọdịnaya bụ ọdịnaya… akwụkwọ akụkọ ọcha, blọọgụ blọọgụ, vidiyo, pọdkastị, ozi infographic ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ enwere ike chepụta iji kwusaa ozi gị. Ma ahịa ahịa chọrọ nghọta nke ndị na-ege gị ntị bụ, usoro ndị a na-agwa, ịchọpụta ebe ndị na-ege ntị nọ, ịmara ihe bụ ebumnuche ha, na ịdepụta usoro kwesịrị ekwesị na ụdị ọdịnaya maka atụmanya ma ọ bụ ndị ahịa ahụ ga-eri. Ọ gụnyekwara ịkekọrịta na usoro nkwalite ị ga-eji rute ha.
Ọtụtụ azụmahịa na-emegharị ahịa ọdịnaya dị ka mgbasa ozi. Ha aghọtaghị ihe kpatara tweet, mmelite ọkwa ma ọ bụ post blọọgụ anaghị achụgharị mgbanwe. Ọdịnaya ọdịnaya abụghị ozugbo, ire ahịa ọdịnaya bụ atụmatụ chọrọ ka ọ dị ugbu a na ntụzi aka ka ị nwee ike iduzi ndị na-ege ntị site nzụta, ijigide ma ọ bụ usoro nnabata. Dị ka chumming bụ ịkụ azụ, ọtụtụ mgbe ị ga-enwerịrị usoro ntọala nke ọdịnaya iji kwalite n'ofe nri iji dọta ndị na-ege gị ntị.
Ofdị Ahịa Ahịa
Ndị folks na QuickSprout dere ọmarịcha ọkwa na ụdị nke ire ahịa ọdịnaya na mgbe iji ha. Anyị agaghị abanye n'ụdị ọ bụla, mana ọ ga-amasị m ilekwasị anya na isi ọdịnaya 6 bụ nke anyị hụrụ nke kachasị mma maka ndị ahịa anyị n'ịrụpụta ha nwere mgbasa ozi akụrụngwa:
Isiokwu - ewu a kediegwu Ọbá akwụkwọ ọdịnaya nwere isiokwu dị nkenke dị oke elu nke na-aza ajụjụ maka atụmanya, ndị ahịa ma na-enye nduzi echiche n'ime ụlọ ọrụ bụ ntọala nke ụlọ ọrụ ọ bụla. Ndị ụlọ ọrụ na-elele blog anya dị ka atụmatụ otu oge, mana ọ bụ n'ezie ntinye ego na-emewanye ma na-emewanye atụmatụ mmasị. Enwere ike ịchọta ma zoo ederede ụbọchị ọ bụla iji mee ka ikike gị nwere ịdọrọ, ijigide ma bulie ndị ahịa elu. Gingde blọgụ maka azụmahịa na-enye nri maka ọchụchọ na mmekọrịta mmadụ na ibe ya ịrụ ọrụ ma dị oke mkpa nye nzukọ ọ bụla.
Infographics - imepụta ihe omuma ihe omuma nke emeputara nke oma, na-akowa ya nke oma, ma nye kwa usoro enwere ike ihu ma kesaa n'ofe otutu ihe na teknụzụ abụrụla uru dị ịtụnanya nye nzukọ ọ bụla anyị rụtụrụla. DK New Media na-aga n'ihu ịbụ onye ndu na atụmatụ a, nyochara, mepụta, hazie, kesaa ma bulie ihe karịrị otu narị infographics. Nakwa, anyị na-enye ndị ahịa anyị faịlụ ndị bụ isi ka e wee weghachite eserese ahụ na nkwupụta ndị ọzọ na ahịa.
Akwụkwọ akụkọ - Ọ bụ ezie na ihe ọmụma na-adọta, anyị achọpụtala na ndị na-acha ọcha na-agbanwe. Ọ bụ ezie na ndị ọbịa na saịtị gị ga-agụkarị ma kesaa ozi na infographics, ha ga-azụkarị ozi kọntaktị ha ka ha wee banye miri emi nke ukwuu na isiokwu ha na-eme nyocha. Ebumnuche nke onye na-ebudata akwụkwọ akụkọ na-abụkarị na ha na-eme nyocha iji zụta ezigbo oge. Mepụta ụzọ site na post, infographic na oku na-aga na ibe ọdịda iji debanye aha na ibudata akwụkwọ akụkọ na-aba uru maka ndị ahịa anyị niile.
n'ihu - Iwulite ntụkwasị obi, ikike, na ntụkwasị obi na ụlọ ọrụ gị chọrọ ka ị gosipụta isiokwu na nzukọ, webinars, ma ọ bụ nzukọ ahịa. Debe ihe ngosi ndị ahụ n'ịntanetị na nyiwe dịka Slideshare, wee kesaa ha site na post na mgbasa ozi mmekọrịta nwere ike ime ka ndị ọgbọ gị lebara gị anya.
Videos - A kwesiri inwe maka atụmatụ ọdịnaya nke nzukọ ọ bụla bụ vidiyo. Y’oburu na ihe onyonyo kwuru otu puku okwu, vidiyo nwere ike inye njikọ nke mmetụta obi karịrị atụmatụ ọ bụla. Echiche ndị ndu, ndụmọdụ, vidiyo na-akọwa, vidiyo vidiyo of ha niile na-agwa ndị na-ege gị ntị okwu nke ọma ma na-achọwanye kwa ụbọchị. Ghara ikwu na ndị mmadụ na-achọkarị vidiyo karịa ihe ọ bụla ọzọ!
email - ịghaghachite ozi gị na onye debanyere aha nwere otu n'ime nloghachi kachasị elu nke usoro ahịa ọdịnaya ọ bụla. Site na mgbe nile izipu atụmanya gị na ndị ahịa gị, ozi gị na-enye ma uru ma na-echetara gị na ị nọ ya mgbe ha chọrọ gị. All ndị a ọzọ azum nwere ike ụgbọala ndị gị ika na-adịghị njikere ka a zụọ… nke ahụ bụ mgbe ị chọrọ iji hụ na ha debanyere gị email. Usoro ọdịnaya ọ bụla ga-enwerịrị usoro ịre ahịa email iji zụlite ma chụpụ ndị debanyere aha na ntughari.
Etu ị ga-esi wepụta Azụmaahịa Ahịa
N'ụzọ dị ịtụnanya, nzọụkwụ mbụ anyị na-eme mgbe anyị na ndị ahịa na-arụ ọrụ abụghị nyocha na mmepe nke kalenda ọdịnaya. Nzọụkwụ mbụ anyị na-enyocha saịtị ha dị ugbu a na ikike dị n'ịntanetị iji hụ na ha nwere ike iduga onye ọbịa na-ere ahịa ọchụchọ, onye mgbasa ozi na-elekọta mmadụ ma ọ bụ onye na-eso ụzọ, ma ọ bụ onye ọbịa ọzọ site na usoro usoro ndu. Ndị a bụ ụfọdụ ajụjụ anyị na-achọ azịza maka:
Enwere ụzọ ntụgharị site na ọdịnaya ọ bụla nke na - eme ka onye na - agụ ya mee ihe ịchọrọ ka ha mee?
Is nchịkọta arụ ọrụ nke ọma iji hụ na ị nwere ike ịlele mmetụta nke azụmaahịa ọdịnaya gị laghachi na isi mmalite?
Ejiri saịtị gị nke ọma ka ọdịnaya ị mepụtara wee nwee ike ịchọta na nsonaazụ njikwa nchọta dị mkpa? Ihe ochicho njini Search bu ntọala maka usoro ihe obula.
E gosipụtara ọdịnaya ma rụọ ọrụ nke ọma ka ọ bụrụ na enwere ike ịkekọrịta ya na mgbasa ozi mmekọrịta? Nkọwapụta ị ga - enweta site na mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ike ime ka ọbịbịa gị, mgbanwe yana ntinye ntinye injin gị.
Enwere ike igosipụta ọdịnaya ahụ n'ụzọ ziri ezi na ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ mbadamba? Offọdụ ndị ahịa anyị na-ahụ ihe karịrị 40% nke okporo ụzọ ha na-abịa site na ekwentị!
Ozugbo ntọala ahụ dị, anyị na-arụ ọrụ iji nyochaa ọdịnaya nke ndị na-asọmpi gị na-emeri, chepụta atụmatụ ga-enyere gị aka ịsọ mpi, yana ịmepụta kalenda ọdịnaya ga-eme ka ịnwe ike ịkwatu gị. ụgwọ kwa ndu (CPL) ka ị na-aga n'ihu ịbawanye gị òkè nke olu (SOV), na-akwọ ụgbọala ma na-eme ka ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-agbanwe, na-emecha na-abawanye gị laghachi na ntinye ego ahia oge n'aga.
Organic ọdịnaya ahịa nwere ike iwepụtakwu oge ụlọ ọrụ gị nwere ntụsara ahụ, yabụ na-eme ka usoro ịre ahịa ọdịnaya gị dị ngwa akwụ ụgwọ mgbasa ozi na nkwalite yana usoro mmekọrịta ọha na eze nwere ike isi nyere gị aka inweta ọtụtụ ndị na-eduga ngwa ngwa, nwalee ma tụọ ha atụmatụ gị nke ọma, ma gbasaa ndị na-ege gị ntị na mmetụta nke ọma.
Afọ Ole Ka Anyị Chọrọ?
Nne nke ajuju nke ndi ahia choro. Ihe m kwuru bụ nke a… ahịa ọdịnaya bụ agbụrụ. Kingjụ m ego ole achọrọ dị ka ịjụ onye na-anya ụgbọ ala agbụrụ kedu ka ha ga-esi nwayọ iji merie. Ihe kacha mma nke igwe ahụ dị, nke ka mma taya, ka onye ọkwọ ụgbọ ahụ nwere ikike - ihe ka mma.
Ọdịnaya ọdịnaya chọrọ omume, nnwale, yana mmelite na-aga n'ihu iji wee merie ndị asọmpi gị! Ọ bụghị maka ịmịkwuo ọdịnaya, ọ bụ maka iwulite ọbá akwụkwọ akọwapụtara nke ọdịnaya nke na-ekpuchi usoro niile nke njem onye na-azụ ahịa iji nyere aka duzie ha gaa na ntụgharị.
Ego Ole Ka Azụmaahịa Ahịa Na-efu?
Ọzọ doozy nke ajuju! Anyị na-akwado a ewepụghị mmefu ego na-agbasa gafee mmekọrịta ọha na eze, nkwalite, na mmepụta ọdịnaya maka ụlọ ọrụ ịmalite. Nke ahụ nwere ike ịdị oke ọnụ ($ 15k US kwa ọnwa) mana ọ bụ ntọala anyị maara na-arụ ọrụ nke ọma. Nwekwara ike ịmalite na-enweghị PR na nkwalite, ọ na-ewe ogologo oge ka ọ gbagoo.
N'ime ọnwa ole na ole, ị kwesịrị ịmalite ịmalite ịmalite ịmalite ọrụ n'ime afọ ahụ ị ga-enwe ike ịkọwapụta mmemme gị nke ọma ma ghọta ụgwọ akwụ ụgwọ ọ bụla. Nwere ike ịgbanwe ma dozie mmefu ego gị n'etiti mmepe ọdịnaya, nkwalite, na mmekọrịta ọha na eze iji bulie mmetụta ahụ, belata ọnụahịa gị kwa ndu, na ịkwanyekwu ndu ma ọ bụ ntụgharị.
Buru n'uche na ndị asọmpi gị na-akụzi usoro ahịa ọdịnaya ha n'otu oge, yabụ asọmpi ahụ nwere ike ịbawanye ma ọ bụ belata - chọrọ ka ị gbanwee mmefu ego gị na atụmanya gị n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Anyị nwere ndị ahịa na-achịkwa azụmaahịa ọdịnaya n'ihi na enweghị asọmpi, anyị nwekwara ndị ahịa na-agbagha asọmpi naanị n'ihi na ha enweghị ike ịmakọ ihe ndị asọmpi ha na-etinye. Nnukwu atụmatụ nwere ike ịmalite ịse mpi ahụ mgbe niile!
Tags: ịde blọgụ atụmatụkalenda ọdịnayammepe ọdịnayacontent Marketingatụmatụ ịre ahịa ọdịnayankwalite ọdịnayamgbanweụlọ ọrụ ịde blọgụ atụmatụụgwọ kwa nduemailemail atụmatụnkọwa videoego ole ka anyị chọrọego ole ka ahia ahia na-efuVidio Ahịapratụmatụ ngosinkwalitemmekọrịta ọhanezequicksproutlaghachi na ntinye ego ahiaòkè nke oluslideshareụdị nke ire ahịa ọdịnayavideo atụmatụihekedu ihe bụ ire ahịa ọdịnayaatụmatụ edemede